Soomaalida Falköping iyo SD | Somaliska
Maamulka kamuunka Falköping ayaa bishii December go'aamiyay in 80 waalidiin Soomaaliyeed oo ilmahooda ka maqanyihiin la siiyo 10 maalmood oo fasaxa oo aan lacagta laga goosan si ay ilmahooda u soo booqdaan. Arintaan ayaa aad loogu amaanay kamuunka Falköping oo noqday kuwii ugu horeeyay ee arintaan sameeya ayadoo 6 qof ay ilaa hada ka faaideysteen fursadaan. Fikirkaan ayaa kamuunka waxaa u bandhigay Anders Lindström oo qaabilsan soo dhaweynta soo galootiga, Anders waa nin aad ugu dadaala arimaha Soomaalida, halkaan ka aqriso wareysi aan la yeelanahay. Ninka ku matala xisbiga cunsuriga SD kamuunka Falköping ayaa racfaan ka qaatay go'aankii kamuunka asagoo diidan in la siiyo waalidiinta Soomaalida maalmo fasaxa oo aan lacag laga goosan. Arild Svensgam oo ku matala SD Falköping ayaa sheegay in diidmadiisa aysan ahayn arin xisbiga ka soo baxday balse ay tahay aragtidiisa shaqsiyeed. Si kastaba ha ahaatee xisbiga SD ayaa lagu yaqaan neceybka uu u qabo Soomaalida ayagoo markasta tusaale u soo qaada Soomaalida in ay yihiin calaamada fashilka isdhexgalka bulshada Sweden iyo soo galootiga.
Maamulka kamuunka Falköping ayaa bishii December go’aamiyay in 80 waalidiin Soomaaliyeed oo ilmahooda ka maqanyihiin la siiyo 10 maalmood oo fasaxa oo aan lacagta laga goosan si ay ilmahooda u soo booqdaan.
Arintaan ayaa aad loogu amaanay kamuunka Falköping oo noqday kuwii ugu horeeyay ee arintaan sameeya ayadoo 6 qof ay ilaa hada ka faaideysteen fursadaan.
Fikirkaan ayaa kamuunka waxaa u bandhigay Anders Lindström oo qaabilsan soo dhaweynta soo galootiga, Anders waa nin aad ugu dadaala arimaha Soomaalida, halkaan ka aqriso wareysi aan la yeelanahay.
Ninka ku matala xisbiga cunsuriga SD kamuunka Falköping ayaa racfaan ka qaatay go’aankii kamuunka asagoo diidan in la siiyo waalidiinta Soomaalida maalmo fasaxa oo aan lacag laga goosan.
Arild Svensgam oo ku matala SD Falköping ayaa sheegay in diidmadiisa aysan ahayn arin xisbiga ka soo baxday balse ay tahay aragtidiisa shaqsiyeed. Si kastaba ha ahaatee xisbiga SD ayaa lagu yaqaan neceybka uu u qabo Soomaalida ayagoo markasta tusaale u soo qaada Soomaalida in ay yihiin calaamada fashilka isdhexgalka bulshada Sweden iyo soo galootiga.
Abu Ansaari says: